Akụkọ - Kedu ihe kpatara ịchọta onye nrụpụta PCB gị na China
China bụ mba kacha baa uru ebipụta bọọdụ sekit. Ka ọ dị ugbu a, uru nrụpụta PCB na Eshia dị nso na 90% nke mkpokọta ụwa. N'ime ha, China na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia nwere uto ngwa ngwa. Agbanyeghị, gịnị kpatara ịchọta onye nrụpụta PCB nke gị na China?
Tụnyere mba ndị dị na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia, China abụghị naanị na ọ nwere uru ọkọnọ akụrụngwa zuru oke yana uru dị ọnụ ala, ikike imepụta ya na nkọwa teknụzụ nwere ike imezu ihe ndị ahịa mba ọzọ chọrọ. Ahịa ndị China nwere ike ịnye akụrụngwa zuru oke maka ọrụ gị. Site na mmepe ngwa ngwa nke teknụzụ elektrọnik nke China, enwekwara ike nrụpụta PCB nke ukwuu. N'ime nnukwu ahịa a, ị nwere ike ịchọta onye nrụpụta PCB n'ụzọ dị mfe nke nwere ike ịnye ma ọnụ ala ma dị elu. Nke a bụ ihe kpatara nrụpụta PCB na China na -eji na -ewu ewu.
1. Belata ọnụ ahịa nrụpụta gị?
N'ime ụlọ nrụpụta PCB, ụgwọ ọrụ na -emetụta oke ọnụ nke nrụpụta PCB. Inwe ọnụ ahịa ndị ọrụ dị ala n'ahịa China nwere ike belata ọnụ ahịa PCB gị nke ukwuu. Na mgbakwunye, site na mmepe ngwa ngwa nke teknụzụ China, ị nwere ike Ahịa ndị China na-achọta ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ihe ndị ọzọ dị ọnụ ala, nke nwere ike ịchekwa gị nnukwu ego na-enweghị emetụta arụmọrụ ngwaahịa. Na China, ikenye akụrụngwa bụ ihe kachasị mfe. Na mgbakwunye na otu ngwaahịa, ndị na-emepụta PCB nke China nwere ike ịnye ọrụ nkwụsị, site na mbido PCB mbụ ruo ọgbakọ ikpeazụ nke ngwaahịa emechara, ị nwere ike nwee obi ike na ị nwere ike hapụ ya onye nrụpụta PCB nke China ka ọ rụchaa. Tụkwasị na nke ahụ, China nwere usoro njem ụgbọ ala dị mma yana njem dị mma. Nwere ike belata oge nnyefe nke ngwongwo iji hụ na oge na asọmpi nke ngwaahịa a.
2. Otu esi achọta onye nrụpụta PCB dị ọnụ ala ma dịkwa elu
N'ihi nnukwu ahịa PCB dị na China, ọrụ nke ndị na -emepụta bọọdụ sekit enweghị atụ. Yabụ kedu ka esi achọta ndị nrụpụta PCB dị ọnụ ala ma dị elu site na puku ụlọ nrụpụta bọọdụ sekit?
Ezigbo ndị na -emepụta PCB ga -eji obi ha niile tụlee ndị ahịa, wepu obi abụọ ndị ahịa niile, ma belata ọnụ ahịa ndị ahịa.
1. Ọ bụrụ na ndị nrụpụta PCB nwere ike ịnye nkọwa doro anya gụnyere usoro ọnụahịa
2. Ọ bụrụ na ndị nrụpụta PCB dị njikere ịnye ntụnye ọ bụla dị irè iji belata ọnụ ahịa gị.
3. Ọ bụrụ na ndị nrụpụta PCB na -ana ọnụ ego ọ bụla ezi uche na -adịghị na ya mgbe ịtụchara.
4. Ha na -eji ihe ọ bụla amabeghị na -enweghị ikike gị.
PHILIFAST anọwo na -elekwasị anya na ọrụ PCB EMS ihe karịrị afọ 10, ọ na -enyekwa ọnụ ahịa asọmpi.
Ọ na -enyekwa ndị ahịa ndụmọdụ ọkachamara iji belata ọnụ ahịa ndị ahịa yana usoro nkọwapụta nke edoziri nke ọma.